Xasan Cali Kheyre: Guddoomiye Mursal oo shaaciyey in kalsoonidii lagala noqday Ra’iisul wasaare Khayre | Hangool News
July 26, 2020 - Written by Hangool News 1
Hangoolnews:- Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya ee barlamaanka federaalka Maxamed Mursal Sh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in baarlamaanka uu maanta kalsoonidii kala noqday xukumaadda ra’uusul wasaare Xasan Cali Khayre.
Gudoomiyaha golaha shacabka oo goordhaw warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in cod la qaaday ka dib 170 xildhibaan ay kalsoonadii kala laabteen xukuumadda Xasan cali Khayre halka ay diideen 8 xildhibaan.
“Sida uu faraya dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya, waa in mdaxweynuhu si deg deg ah u soo magacaabaa ra’iisal wasaare iyo xukumad waddankan gaarsiin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay”, ayuu yiri Mursal oo shir jaraa’id qabtay.
Todobo qodob oo ra’iisul wasaare Kheyre uu ka hadlay
Soomaaliya ma waxay gashay olole doorasho oo xilli hore ah?
Qoraalka sawirka,Gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal
Xil gudasho la’aan
Guddoomiya Mursal ayaa ku eedeeyay xukumadda Kheyre inay ku guul dareystay arrimo dhowr ah oo muhiim u ahaa qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah. Qodobada uu Guddomiye Mursal sheegay inay xukumadda Khayre ka gaabisay waxaa ka mid ah:
Qoraalka sawirka,Xubnaha baarlamaanka